Warkii Faraska | Fardaha Noti
Dunida farasku waa mid xiiso leh iyada oo tanina ay noo caddahay inay badan yihiin wararka ku saabsan mowduuca. Meelkan waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada wararka la ururiyey si xeel dheer si aad ugu raaxaysato kuna cusboonaysiiso macluumaadka ku saabsan xayawaankan.
Wararka, tilmaamaha iyo xitaa sheeko xariir la leh fardaha. Marka aan ka hadlayno wararka waxaan ula jeednaa inay jiraan qaybo badan oo tixraac ah adduunka fardaha, ciyaaraha, Olimbikada, daaweynta, natiijooyinka iyo waqti dheer iwm. Taasi waxay ka farxin doontaa taageerayaasha adduunkan, in kasta oo ay xoogaa qaali tahay waxay had iyo jeer inaga tagi doontaa dareen wanaagsan.
Ma iloobi karno inay jirto ikhtiyaar ah faallo ka bixi war kasta oo faras ah iyo meeshan gaarka ah waa fikrad fiican in la awoodo in aan dhiibano ra'yigeena.
Ma waxaad ku fikireysaa inaad hesho faras? Kahor intaadan wax qaban, waxaa muhiim ah inaad ogaato inta ay le'egtahay qiimaha ay leedahay in lagu sii hayo xaalad wanaagsan, ...
Sidee farduhu u seexdaan?
Farduhu, sida xayawaanka oo dhan iyo gaar ahaan naasleyda, waxay u baahan yihiin inay nastaan. Laakiin haddii ay tahay tii ugu horreysay ...
Faraska ugu horreeya, Hyracotherium
Waa Hyracotherium, faras ka tirsan hiddo-wadaha naas-nuujiyaha 'perissodactyl mamals', oo isagana la mid ah ...
Lucy Rees, oo caan ku ah adduunka faraska
Lucy Rees asal ahaan waxay ka timid Wales waxaana loo arkaa inay caan ku tahay adduunka faraska. Haweenaydan oo ...
Nolosha labaad ee fardo fardo hore
Farsamooyinka xilliyada dhibaatooyinka ayaa noqda kuwo aad moodada, maadaama aysan sahlaneyn inaad iibsato jarista qaaliga ah ...
Fardooleyda Mashiinka La Uruurin Karo
Breyer waa shirkad Mareykan ah, oo si gaar ah ugu dhalatay magaalada Chicago, oo u heellan soo saarista tirooyinka fardaha la ururiyo. Kuwani…
Sida loo Fuulo Faraska Faso Fino
Fardaha wanaagsan ee paso ma sahlana in la fuulo, taa bedelkeedna waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah dhinaca ...
Fardaha dadka ka ganacsada daroogada ee reer Mexico ayaa ku guuleysta tartamada Mareykanka
Dunida tartanka fardaha marwalba waa laga shakisan yahay, xaalado badan waxaa laga hadlaa maafiyada ama saameyn ...
Tilmaam cusub oo lagaga gudbo cabsida fuushan faraska
Jacaylka fardaha waa wax gebi ahaanba caalami ah, dad badan ayaa aaminsan in ka soo horjeedka ay tahay wax jabaya ...
Furayaasha noqoshada wadaha wanaagsan
Shaki la'aan mid ka mid ah furayaasha ugu muhiimsan ee ahaanshaha wadaha wanaagsan wuxuu la xiriiraa ...
Waa inaan marwalba ka fikirnaa in farduhu ay yihiin xayawaan aad u xiiso badan, laakiin in kiisaska oo dhan ay leeyihiin shakhsiyad ...